Articles Archives ⋆ Page5of 86 ⋆ Popular
ဒီလူ့ဘဝနေရတဲ့အခိုက်၊ မင်း နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတာ တန်တယ် ကွ မင်းကြောင့် ရေခဲအလှူ ငါလုပ် ခဲ့ရတာ။ အခု ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူ အတန်းတွေပြန်ပြီး နှလုံးသွင်းတဲ့အခါ ပြုဖူးသမျှ အလှူတွေ အားလုံးကို ကျော်ပြီး ရေခဲတွေချည်း…
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်သည့် အခမ်း အနားမှ စတင်၍ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူး ချွန်ဆု ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနား အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်…
၂ဝ၁၉ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီပြီးရင်တော့ ရုပ်ရှင်လော ကသားတွေဟာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နှစ် တစ်ရာပြည့်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ရာပြည့် ပွဲတော်ကြီးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်း ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ဘာတွေ လုပ်ပြကြမလဲဆိုတာကို စောင့်မျှော် ရင်း. .…
သူတို့ဟာ ကားတစ် ကားကို တစ်ကြိမ်လောက် စိတ်ပျော် ရွှင်မှုအတွက် ကြည့်တာနဲ့ ဆရာတို့ လို တာဝန်ကြောင့် ၃ ကြိမ် ၄ ကြိမ်စီ ကြည့်တာနဲ့ အမြင်ချင်း အတွေးချင်း တူချင်မှ တူပေမယ်. .…
"လူထုဒေါ်အမာ"နဲ့ ခေတ္တဆုံ တုန်း ဆရာမကြီးရဲ့ လေယူလေသိမ်း ကို ကြည့်ရင်း နားထောင်ရင်း "ပေါ် ဦးသက်စကားပြောပုံနဲ့ တူလိုက်တာ" လို့ တွေးမိတယ်။ လက်စသတ်တော့ ပေါ်ဦးသက်ဟာ ဆရာမကြီးရဲ့ သား တပည့် လူထုတိုက်ထွက် ဖြစ်နေသ…
မီးအရောင်အောက်တွင် ကခုန်နေသောသူ့ကို ကျွန်တော်မြင် တွေ့ရပါသည်။ ချစ်မေတ္တာဟု ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါ။ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးမှုပါပဲ။ သူဆိုသော သီချင်းကို. . .
တပေါင်းလ၏ မြန်မာ့ယဉ်ကျေး မှုပွဲတော်သည် "သဲပုံစေတီပွဲတော်" ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနိက ကျမ်းများ တွင် သဲပုံစေတီတည်ထားကိုးကွယ် ခြင်းသည် ရှေးကမ္ဘာအသင်္ချေကပင် ရှိခဲ့သော ဘာသာယဉ်ကျေးမှုဖြစ် သည်ဟု ဖော်ပြထား၏။. . .
မိမိတာဝန်ယူထားတဲ့ တာဝန်၊ ရာထူးအလိုက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသစွာ အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ ကျွန်တော် တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း လိုအပ် နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန် တော်လည်း ပရိုပီသဖို့ အများကြီး ကြိုးစားသင်ယူနေရဦးမယ်. . .
ကျွန်တော်လစဉ်ရေးခဲ့သော ဆောင်းပါးများကို လူငယ်များအ တွက် စာဆိုမိတ်ဆက်စာမိတ်ဆက် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် ကောင်းသန့်စာပေက စာအုပ်ထုတ် ခဲ့ပါသည်။ ကောင်းနိုးရာရာ မိတ် ဆက်ပေးသော စာအကြောင်း 'မြည် စမ်း'ကြည့်ပြီးနောက် ထိုစာများကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလိုသောစိတ် အနည်းနှင့်…
သူဆင်းရဲမလေး စကားဆိုလေ လျှင် ဖြူမွေးညီညာသော သွားများ ကို ဖျပ်ကနဲတွေ့ရသည်။ မုသားဟူ ၍ ငယ်ရွယ်စဉ်မှ စကာ ယနေ့အချိန် အထိ တစ်ခွန်းတလေမျှပင် မဆိုဘူး သောသူဟု ထင်မှတ်ချင်ဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်. . .